XOG: Muddo Hal Bil Ka Yar Ayaa Premier League Ka Hadhay, Akhriso Kulamada Ay Liverpool & Man City Koobka Horyaalka Ugu Kala Guulaysan Doonaan. - GOOL24.NET
Kooxaha Liverpool iyo Manchester City ayaa halkooda ka sii watay guulihii xidhiidhka ahaa ee ay ku soo jireen, waxayna labada kooxood muujiiyeen in ay yihiin labadii kooxood ee abid ugu adkaa ee hal xili ciyaareedkan koobka Premier league ku tartamaya.
Liverpool iyo Manchester City waxay haddaba dhaaceen dhibco koobka Premier league loogu soo guulaystay, waxayna taasi muujinaysaa in tartankii abid ugu adkaa uu xili ciyaareedkan ka dhacayo horyaalka Ingiriiska iyada oo haddaba ay khabiirada kubbada cagtu bilaabeen in ay saadaalin kari waayaan kooxda ku guulaysan doonta.
Manchester City waxay wali haysataa hal faa’iido oo ah in ay tahay kooxda uu hal kulan baaqi u yahay, laakiin waxaa xaalada Man City sii adkaynaysa in ay la ciyaari doonto laba kooxood oo ka mid ah lixda kooxood ee Premier league ugu waa wayn.
Man City waxay guul muhiim ah ka soo gaadhay kooxda Crystal Palace iyada oo Raheem Sterling uu laba gool dhaliyay laakiin Liverpool ayaa kaga jawaabtay guushii ay Chelsea kaga gaadhay Anfield taas oo maskax ahaan saamayn ugu yeelan karta kooxda Guardiola maadama oo ay rajaynayeen in ay Chelsea dhibco ka lumin kartay Reds.
Liverpool waxay ciyaartay 34 kulan oo Premier League ah waxaana baaqi u ah afar kulan oo ayna ku jirin hal koox oo wayni inkasta oo ay iyaga laftoodu waqtigan yihiin kuwo adag oo ay tahay in ay ka soo gudbaan halka Man City ay ciyaartay 33 kulan waxaana baaqi u ah shan kulan oo laba ka mid ahi waa wayn yihiin.
Liverpool waxay haysataa 85 dhibcood halka Man City ay haysato 83 dhibcood waxayna Man City hogaanka sii qabtay markii ay Crystal Palace guusha ka soo gaadhay laakiin isla markiiba Liverpool ayaa hogaanka Premier league soo ceshatay.
Dagaalkii ugu danbeeyay ee koobka Premier league loogu kala guulaysano ayaa bilaami doona kadib kulamada lugta labaad ee UEFA Champions league oo ay Liverpool iyo Man City markooda doonayaan in ay sii wataan tartanka kooxaha Yurub inkasta oo ay City guuldaro kala soo laabtay Tottenham kulankii lugtii hore ee UCL.
Haddaba waxaanu halkan idinku xusuusinaynaa 9 ka kulan ee sida rasmiga ah loogu kala guulaysan doono koobka Premier league inkasta oo ay wali adag tahay in lakala saari karo kooxaha Liverpool iyo Man City.
Hadaba riix 2 si aad xogtan uga bogato: